Posted by Tranquillus | Apr 11, 2020 | Xirfadaha hadalka iyo qoraalka afka
Waxaad qorsheyneysay inaad codsato gunno, tababar ama kordhinta mushaarka. Kahor intaadan ficil sameyn, samee waxkasta oo ay qaadanayso si aad u muujiso shaqadaada. Haddii aad laba jeer sameyso sida kuwa kale, laakiin qofna taas kama oga. Waqtigaaga waad luminaysaa, waa inaad tixgelisaa inaad qorto warbixin maalinle ah.
Maxuu yahay warbixin hawleed maalinle ah?
Inta lagu jiro cabbiraadaha xakamaynta, waxaa laga yaabaa inaadan xiriir toos ah la laheyn maamulkaaga. Waxaa si fudud laguugu qasbi karaa inaad beddelato qof aad wada shaqeyn jirteen ama kormeerahaaga. Qorista warbixin hawleed maalinle ah ayaa sawir cad ka bixin doonta shaqadaada. Qofka (dadka) mas'uulka ka ah kormeeridaada waxay u adeegsan karaan dukumintigan si ay u gaaraan go'aanadooda. Abaabulkaaga shaqadaada ayaa fududaan doonta. Haddii maamulahaagu ogyahay waxa aad samaynayso iyo waxa aad qorsheynayso in aad samayso. Mid ayaa qiyaasi kara inaad aad uga yara wareersan doonto farriimahaas ama taleefannadiisa.
Macluumaad noocee ah ayaa lagu qori karaa warbixinta hawlaheeda?
Waa su’aal la xiriirta in la keeno dhammaan waxyaabaha lagama maarmaanka u ah, dhammaan macluumaadka suurtagelinaya in si guud loo eego dhammaan howlaha la qabtay maalintii. Shaqada la qabtay, shaqada la qorsheeyay, dhibaatooyinka la soo maray iyo sidoo kale kuwa la xaliyay. Isaga ayaa kaa caawin doona, sida dadka kale oo dhan oo uu saameynta ku yeeshay ficilkaaga, inaad u jihada saxda ah. Qof kastaa wuu ogyahay waxa socda iyo goorta ay dhici doonto, annagu kuma dhex dhaqaaqno iftiinka. Haddii aad ku socoto jihada saxda ah, waan ku hambalyeynaynaa haddii aad qaldantahayna dhaqso ayaan kuu sheegi doonnaa. Cidina ma awoodo inay la wareegaan shaqadaada. Dukumintigaani wuxuu waliba saldhig u noqon karaa wareysigaaga sanadlaha ah, tusaale ahaan.
Tusaalooyinka warbixin maalinle ah lambar 1
Tusaalahan koowaad, hogaamiye kooxeed ayaa ku wargalinaysa kormeeraheeda xaalada shaqada. Isaga laftiisu 15 maalmood ayuu gurigiisa ku xayiran yahay. Maalin kasta way u dirtaa emayl dhamaadka maalinta. Jawaabtiisa, hogaamiyahooda ayaa u sheegaya khaladaadka laga fogaado iyo xalka ugu waxtarka badan ee lagu xaliyo dhibaatooyinka qaarkood.
Mawduuca: Warbixinta waxqabadka ee 15/04/2020
Qalabka iyo xakamaynta alaabada alaabada
Marin ka mid ah goobta loo maro si loo hubiyo u hoggaansanaanta tallaabooyinka covid19
Maareynta dhacdada adeegga
Maamulka boostada iyo telefoonka
Tababarka iyo qiimaynta shaqaalaha cusub
Dayactirka dhismaha iyo qalabka nadiifinta
Qorshaynta wadooyin cusub iyo abaabulida gawaarida gawaarida
Nuqulinta qorshayaasha cusub ee ku saabsan soo xaalida macaamiisha
Hawlaha loo qorsheeyay
Isgaadhsiinta cillad la’aanta maamul
Xusuusinta dhammaan kooxaha badbaadada iyo xeerarka nadaafadda
Rasiidka amarrada alaabada iyo amarada cusub haddii loo baahdo
Bixi biximaha walxaha isudiyaarinta
Dayactirka baarkinka iyo qashin qubka kooxda 2
La kulanka saddexda hoggaamiye kooxeed
Tusaalaha warbixinta maalinlaha ah lambar 2
Tusaalahan labaad, Fabrice, oo ah nin wax keena oo ka soo jeeda gobolka Paris, ayaa maalin kasta warbixin u diraya cunnadiisa cusub. Waxaa la filayaa inuu soo diro warbixintan laba toddobaad. Dhamaadka muddadan, wadahadal cusub ayaa u dhici doona dhexdooda si loo qeexo hawlgallada cusub. Waxaana rajeynaya, taageerada hogaamiyahooda cusub gunno.
Dayactirka gawaarida: jeegaga, cadaadiska taayirka, isbedelka saliida
Shirka macluumaadka caafimaadka ee COVID19
Abaabulka safarka ee socdaalka
Mudnaanta isku diyaarinta
Ka bixida bakhaarka 9:30 a.m.
Gaarsiinta baqshiish guryaha macaamiisha: 15 alaab
Ku noqo bakhaarka 17 galabnimo
Kaydinta baakadaha aan la adeegsan iyo fayl garaynta waraaqaha talobixinta safarka ee xafiiska
ka baaraandegida cabashooyinka macaamiisha, alaabta la diiday ama waxyeelay
Qalabka nadiifinta iyo jeermis-diidka kooxda inteeda kale
Tusaalaha warbixinta maalinlaha ah lambar 3
Tusaalahan ugu dambeeya, kumbuyuutar dib u habeyn kooban ayaa si kooban ugu wargalinaya inuu ka sarreeyo howlaha maalin walba. Adoo qeexaya shaqada guriga lagu qabtay iyo macaamilka. Dhibaato gaar ah ma leh, shaqadu way sii wadataa hawsheeda inkasta oo mudada lagu xidhayo.
Ujeeddo: Warbixinta waxqabadka ee 15/04/2020
9:30 a.m. - 10:30 am HOME
Wareysi lala yeesho Guillaume si aad u fahanto xalka aan u bandhigi doonno shirkadda XXXXXXXX.
Qabyo-wareejinta iyo wareejinta adeegga macaamiisha ee qiyaasta faahfaahsan ee ugu horreysa.
10:30 subaxnimo - 11:30 subaxnimo GURIGA
Abuurista dukumiintiyada loogu talagalay tababarka shaqaalaha ku meel gaarka ah.
11:30 a.m. - 13:00 pm Safarka
U dejinta qaabeynta shabakadda iyo amniga shirkadda XXXXXXXXXX.
Rakibaadda softiweerka telefishinka.
14 pm - 18 pm GURIGA
12 dayactir macmiil shaqsiyeed.
Ugudbinta wicitaanka waxqabadka goobta.
Warbixinta nashaadaadka, waa aaladda lagama maarmaanka u ah faafinta macluumaadkaaga. 25-Abriil, 2020Tranquillus
horeBaro inaad ku madadaasho SKILLEOS, e-learning madal
socdaQaaciddada wanaagsan ee akhlaaqda wanaagsan ee emaylkaaga